सुन्नुस त बिहानको खानेकुरामा के खाने ? - नेपालबहस
सुन्नुस त बिहानको खानेकुरामा के खाने ?
| ९:०७:२६ मा प्रकाशित
११ पुस एजेन्सी । ब्रेकफास्टमा लिइने खानेकुरा गलत पर्दा स्वास्थ्यलाई ठूलो नोक्सानी हुन्छ । खाजामा बिस्कुट, कुकिजको प्रयोग गर्नुहुन्छ भने आजैबाट छोडिहाल्नुस् ।
यसको प्रयोगले फ्याट बढाउनुका साथै पाचन प्रक्रियामा पनि असर पुर्‍याउँछ । बरु विकल्पमा फ्याट फ्री अन्डा, चनालगायतको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ । यस्तो खाजाले तौलसमेत सन्तुलनमा राख्न मद्दत पु¥याउछ ।
बिहानको समय कफी पिउँदा भोक मेटिन्छ । तर, यसले स्वास्थ्यमा भने खराब असर पुर्‍याउँछ । गर्मीमा कोल्ड कफी पिउने प्रचलन हुन्छ । यसो पनि गर्नु हुँदैन ।
जुसलाई हामी स्वस्थकर पेय पदार्थका रूपमा लिन्छौँ । तर, ब्रेकफास्टमा कहिल्यै पनि प्याकिङ जुस प्रयोग गर्नु हुँदैन । यस्ता जुसमा चिनीको मात्रा बढी हुन्छ ।
सुनवल अस्थायी कोभिड अस्पतालमा उपचाररत बिरामी ४ हप्ता पहिले
दाङमा संक्रमित भन्दा निको हुने धेरै ३ हप्ता पहिले
नेपालमा गाँजाजन्य लागूऔषध प्रयोगकर्ताको संख्या बढ्यो ! ३ हप्ता पहिले
माछा मार्न त्रिशूली गएका चिरन फर्केनन् घर १ हप्ता पहिले
कोभिड–१९ का कारण राधाकृष्ण रथयात्रा स्थगित ११ महिना पहिले
मादमेखोला जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन ११ महिना पहिले
महाकालीमा फसेका १० मजदुरको उद्धार ४ हप्ता पहिले
बन्दक बनाइएका बालबालिकालाई विद्रोहीहरूले उपचार गर्ने १ वर्ष पहिले